Ziva mupfuhwira unoshanda
Ziva mupfuhwira unoshanda	Friday, 09 December 2011 08:24	View Comments
naElsie MojapeloMUKADZI wese ari pasi pezuva anoda kuwanikwa nemurume anomuda, agoda iye pasina vamwe. Chishuwo ichi ndicho chadai kukonzeresa madzimai kubata twakawanda nekupinda nepasingaite vachitsvaga zvingaite kuti rudo rwevarume vavo rwusapihwe vamwe asi ivo vega. Kutaura kudai varume vanzwa mudzimba umu nekupihwa zvakasiyana-siyana zvichinzi “mupfuhwire hapana kwaanozoenda”.Maiziva here vanasikana kuti mudzimai wega-wega akapihwa mukana wekugona kupfuhwira murume wake naJehovha asina kwaenda kana chaabata-bata. Ndinodaro nekuti murume wako akasvitsa shoko rerudo usina chawamupa, angofadzwa nezvauri zvichida pachimiro nepahunhu hwako bedzi. Izvozvo zvega zvinofanirwa kuva chisimbiso cherudo rwake.Chinhu chandinoziva chinoshanda zvisina kupotsa ishoko raMwari. Kune vanoritenda, iro rinoreva kuti rakanakira kudzidzisa, kudzora nekuraya mukururama kuti uve wakagadzirirwa mabasa ose akanaka (2 Tim 3 v 16-17).Hakuna murume, nyangwe riri benzi rakadii, asingadi mukadzi akazvishongedza nezvinotevera:l Kuzviisa pasi pemurume wako. Mudzimai anofanirwa kuziva nzvimbo yake pamusha (VaEfeso 5v22-33).l Kuvimbika. Zvirevo 5 v 15-19 inotaura kuti munhu ngaamwe mvura pastime rake chairo, mvura dzaro dzisayerera nenzira dzichitsikwa-tsikwa nevanhu vese. Ngarive rake ega rigonzi rakakomborerwa iye murume agare achifadzwa nemukadzi wehujaya hwake.l
Rurimi rwakaterama. Madzimai mazhinji hatizivi kuti vana baba mudzimba vanotiza pamuromo pedu pasingamharwe nenhunzi. Kunyange kupindura chaiko tinoita kunge tiri kupindura vana vedu. Zvirevo 15v12 inotaura kuti mhinduro nyoro inodzora hasha. Nyangwe zvashata sei, ukaziva matauriro unopedza hondo isati yatanga.l Kuziva kuzvishongedza semukadzi wemunhu. Vakawanda vedu tinoda kukwikwidzana nevasikana pamapfekero asi chokwadi ndechekuti hapana murume anoda kuti muviri waanoti ndewake ega uyanikwe pachena. 1 Timothy 2v9-15.l Uchenjeri nekugona kubata imba yako. Uchenjeri hunokupa zvese zvaungade, kubvira pakuita zvisarudzo nemabatiro anoita vanhu. Zvirevo 8 v 11, 15, 16,18.l Chikuru chaungashandise pamusoro pezvese izvi muromo wako nemabvi. Kana uchivimba kuti Jehovha vanokuitira vakumbire uchirevesa. Shoko ravo kuna vaFiripi 4v4-7 rinoti usashushikane nechinhu asi kuburikidza nemunamato. Muzivise zviri pamoyo wako uchikumbira. Iye achakupa rugare rwake rwunochengetedza pfungwa nemoyo. Waziva izvi hapana chekuti ushushikane nacho. Gara udekare uve mukadzi chaiye — ndiwo mupfuhwira mukuru.-Kwayedza